सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट टेकओभर : राजस्वको खुट्टा लुलो नहोस्
31st January 2016 | १७ माघ २०७२
तर ती कारोबारको आकारको तुलनामा एनसेलको सेयर स्वामित्वको हस्तान्तरण ज्यादै ठूलो रकमको हो। एक सय ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरिएको यो कर्पोरेट टेकओभरको घटना चानचुने अथवा सानोतिनो होइन। त्यस सन्दर्भमा केही प्रश्नहरु उठेका छन्।
त्यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि दुईवटा मुद्दा उठाउन चाहन्छु। पहिलो, एनसेलको मूल स्वामित्व भएको कम्पनी स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको टेलियासोनेरा हो, उसको सब्सिडरीका रुपमा एनसेलले काम गरिरहेको छ भन्ने बुझाई अहिलेसम्म हामी सबैको थियो। जबकि अहिले सार्वजनिक विवरणमा सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा रहेको कम्पनी रेनल्ड होल्डिङसको स्वामित्वमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर देखिन्छ। त्यसलाई धेरै तहमा बनाइएका कम्पनीमार्फत मूल कम्पनीमा स्वामित्व देखाइएको छ।
सेन्ट किट्समा भएको रेनल्ड होल्डिङ्सले एनसेल बाहेक विश्वमा अरु कम्पनीमा लगानी गरिएको विवरण देखिँदैन। त्यसैले यो कम्पनी एनसेल सञ्चालनकै लागि खडा गरिएको देखिन्छ। यसरी नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि एउटा माध्यम कम्पनी तेस्रो मुलुकमा किन खडा गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। नेपालमा सिधै लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै तेस्रो देशमा कम्पनी खडा गरेर किन लगानी गरियो भन्ने बुझ्न सकियो भने भविष्यमा यस्ता किसिमका कारोबार हुन नदिनका निमित्त नीतिगत सुधार पनि गर्न सकिन्छ।
सामान्यता हाम्रो जस्तो देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गर्दा नेपालमा सधैं बस्ने उद्देश्यले नआउन पनि सक्छन्। उनीहरुलाई बहिर्गमनको बाटो सहज हुनुपर्दछ। नेपालमा कुनै व्यवसायमा हात हालिसकेपछि चाहेको बेलामा एक्जिट गर्न त्यति सजिलो छैन।
नेपालमा कुनै व्यवसाय गर्नुपर्‍यो भने त्यसको आकारका आधारमा सुरुमै आवश्यक पुँजी देखाउनुपर्ने हुन्छ र त्यही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। जबकि तेस्रो मुलुकमा एक डलर वा एक पाउण्डमा पनि कम्पनी खडा गर्न सकिन्छ, कम्पनी खडा गर्दैमा त्यसले सञ्चालकमाथि कुनै किसिमको दायित्व थप्दैन र कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी आवश्यक पर्‍यो भने बजार आफैले नै पुँजी आवश्यकता कति हो भनेर तय गर्छ।
यही कारण पनि कम्पनीलाई सिधै नेपाल आउन गाह्रो हुन्छ र अर्को देशमा रहेको कम्पनीमार्फत लगानी गरियो भने आफूले नेपाली कम्पनीको सेयर नबेचेर पनि अरु देशको कम्पनीको सेयर बेचेर पनि सहजै निस्कन सकिन्छ भन्ने सोच लगानीकर्तामा हुन्छ। सायद यही कारण एनसेलले सेन्ट किट्स, नेदरल्याण्डस् र नर्वेलाई बेस बनाएको देखिन्छ।
सेन्ट किट्स पनि ट्याक्स हेभनका रुपमा परिचित छ। तर नर्वे र नेदरल्याण्डसमा त्यति कर छुट छैन। त्यसैले पनि कर दायित्व कम पार्नेभन्दा पनि भोलि कुनै पनि बेला नेपालबाट निस्कनु पर्दा सहज बनाउन बाहिर कम्पनी खडा गरेको देखिन्छ।
भविष्यमा नेपालभित्र कुनै कम्पनीले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने यहीँ कम्पनी खडा गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउनका तथा अहिले उब्जिएका धेरै आशंकाहरु निवारण गर्न सकिन्छ।
कतिपय अवस्थामा हामीले नेपालभित्रै पनि, १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ५७ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित मुनाफा निर्माण गर्ने भनेर प्रश्न पनि उठायौं। यति धेरै मुनाफा गर्दा एनसेलले नेपाली समाजलाई शोषण गर्‍यो, यसले सोचेभन्दा बढी नाफा लियो भन्ने प्रश्न पनि गर्‍यौं।
नाफाको सन्दर्भमा एनसेलले नेपालमा एकाधिकार प्राप्त गरेर मुनाफ कमाएको होइन्। यदि नेपाली उपभोक्तालाई शोषण गरेर कमाएको भए त्यो हाम्रो नियमन कमजोर भएका कारण मान्न सकिएला। फेरि पनि एनसेलले सञ्चालन गरेको कारोबारर प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा हो र यही बजारबाट उसले मुनाफा कमाएको हो।
उसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकारी नियन्त्रणमा रहेको र सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम र अरु केही टेलिकम अपरेटर थिए। बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कसैले कमाउँछ भने त्यसमा प्रश्न गर्न आवश्यकता छैन। कम्पनीको नाफा कति हुन्छ र कति हुँदैन भन्ने कुरा उपभोक्ताको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो। उपभोक्ताले गतिलो सेवा पाए त्यसैले बढी मूल्य तिरेका कारण उसको नाफा बढ्न गयो।
दोस्रो, कर्जा ल्याउने बेलामा नै उसको व्याजको कुरा तय नगरी कर्जा सहजै आउन दिने तर पछि व्याजको विवाद पनि गर्नु हुँदैन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहिलेकाहीँ नेपालको जोखिमका कारण, नेपालको राजनीतिक कारणले बढी व्याज पनि लाग्न सक्छ।
नेपालको एनसेलको टेकओभर टेलियासोनेराको माध्यम कम्पनी सेन्ट किट्समा भएको दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्सबाट भएको देखिन्छ। यो कारोबारमा एनसेलको सेयर सिधै टेलियासोनेराले बिक्री गरेको तथा मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेको देखिँदैन।
आमचर्चामा नआए पनि जानकारहरुले सुनाएअनुसार यो सेयर खरिदकै सुरुवाती चरणमा एक्जियटाका प्रतिनिधिले नेपालका विभिन्न दलका प्रभावशाली नेतासँग स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा विभिन्न सहयोग माग्न गए। उनीहरु किन सहयोग माग्न जानुपर्‍यो?
नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली कम्पनीलाई अथवा विदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई सेयर बेचेर गएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। जस्तो भोटेकोसीमा अमेरिकी लगानीकर्ता कम्पनीले नेपाली लगानीकर्ता कम्पनीलाई सेयर बेचेर गयो। क्रेडिट एग्रिकोलले इन्डोस्वेज बैंकमा गरेको लगानी नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गर्‍यो।
गोर्खा ब्रुअरीको हकमा नेपाली कम्पनीले विदेशी लगानीकर्तालाई सेयर बेचे। ती कारोबारको सन्दर्भमा कारोबार हुनुअघि, हुने क्रममा र भैसकेपछि राजनीतिक दलका नेतालाई सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले भेट्न गएको अथवा लविङ गरेको कहिल्यै पनि सुनिएन। त्यसैकारण विशुद्ध व्यापारिक कारोबार हुँदा क्रेता र बिक्रेताले दलका नेताहरुको घर घरमा धाइरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दै पर्दैन।
प्रचलित कानुन बमोजिम सेयरको हस्तान्तरण नेपालमा गर्नुपर्ने भए नेपालमा हुन्छ। अरु कुनै देशमा हस्तान्तरण हुने भए त्यही देशमा हस्तान्तरण हुन्छ। अहिले भने कारोबारको सुरुमै गोप्य तरिकाबाट ठाउँ ठाउँमा गएर नेतालाई भेटेर वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास किन गरियो भन्दा सम्भवत यो कारोबारमा नेपालमा पुँजीगत लाभकरवापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सुरुदेखि नै त्यस्ता नेताहरुलाई विश्वासमा लिन सकियो भने लाभकर तिर्नै नपर्ने गरी उम्कन सकिन्छ अथवा तिर्नुपर्दा पनि दायित्व कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच देखिन्छ।
यो शंकालाई पुष्टी गर्ने आधार पनि देखिन्छ। जब यो कारोबार हुन लागेको टेलियासोनेराले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई जानकारी दिन विवरण जारी गर्‍यो, त्यतिबेला हामी नेपालबाट किन निस्कन पर्‍यो र कसलाई बेच्न लागिएको छ भन्ने जानकारी दियो। त्यसैगरी एक्जियटाले पनि नेपालमा कम्पनी किन्न लागेको, मूल्य तय भएको र स्थानीय साझेदार आफूले चाहेको व्याक्ति हुने भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्‍यो। यसको अर्थ हो यो कारोबार सम्पन्न गर्ने दिशामा एउटा काम भएको छ।
जबकि नेपालमा रहेका नियमनकारी निकायहरुले यो कारोबारका विषयमा हामीलाई केही पनि जानकारी छैन भन्ने विषय सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरे। दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका शीर्ष अधिकारीले संसदको विकास समितिमा समेत यस विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताए।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष स्वयंबाट एनसेलमा अन्तर्निहीत स्वामित्व बाहिर हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ भन्ने विषय हामीलाई जानकारी दिइएको छैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् र कारोबार गर्ने घोषणा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि अवस्था अहिले उही छ।
मोबाइल स्पेक्ट्रम भनेको प्राकृतिक स्रोत हो। यस्तो स्पेक्ट्रम जसले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, उसलाई दिन सकिँदैन। यस्तो प्राकृतिक साधन, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएका सीमित कम्पनीलाई मात्रै दिन सकिन्छ। त्यसैले यो व्यवसाय कसको स्वामित्वमा जान्छ? उसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन?
व्यवसायमा पारदर्शीता र इमान्दारिता देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ। त्यसै कारण यस्ता कम्पनीको प्रत्यक्ष स्वामित्व वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व कसैले बेच्छ र अर्को कसैले लिन्छ भने नियमनकारी निकायले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। किनकि लाइसेन्स दिँदा त्यो क्षमता परीक्षण गरिएको हुन्छ। यदि त्यो कम्पनीले स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने उनीहरुलाई दिनु हुँदैन।
जस्तो भारतमा डाल्टो ट्रेडले टेलिकम कम्पनी युनिकटेकको २६ प्रतिशत स्वामित्व डेढ अर्ब डलरमा किन्न खोजेको थियो। रसियामा भिम्पल कम चलाइरहेको अल्फा समूहको माध्यम कम्पनी डाल्टोट्रेडका मालिकमाथि युरोपमा घुस र भ्रष्ट्राचारमाथि छानबिन भइरहेको भन्दै भारतले लगानी रोकिदियो।
त्यसैले टेलिकम जस्ता संवेदनशील कम्पनी, जसले लाइसेन्स लिँदा जुन शर्तमा लिएको हुन्छ त्यो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लाइसेन्स दिने नियमनकारी निकायमा बिक्रेता कम्पनी पनि नपुगेको र क्रेता कम्पनी पनि नपुगेको तर बिक्रेता कम्पनीभन्दा क्रेता कम्पनी नेताको दैलोमा पटक पटक पुगेका कारणले पनि शंका अझै बलियो बनेर गएको छ। र यो शंका पुष्ट्याई गर्ने आधार बनेको पनि छ।
कम्पनी खरिद बिक्री हुँदैछ, यो नियमनकारी निकायलाई थाहा भएन, तर आधिकारिक व्याक्तिबाट सुन्नमा आएअनुसार बिक्रेता कम्पनीभन्दा पनि क्रेता कम्पनी एक्जियटाले नेपालको राजस्व प्रशासनसँग सुरुदेखि नै सल्लाह परामर्श लिएको र नेपालमा पुँजीगत लाभको कर दायित्व तिर्न पर्दैन भन्ने आश्वासन प्राप्त गरेको सुनिएको छ। सम्पत्ती हस्तान्तरणको क्रममा यी दुई वटा कुरा राम्रो देखिएन, यसबाट कर छल्ने प्रपन्च भयो कि भन्ने सत्य स्थापित हुन गएको देखिन्छ।
लाभकर लाग्छ नै
अब करको विषयलाई सबिस्तार व्याख्या गर्दा यसका दुई वटा पक्षहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा टेलियासोनेराको अन्तरनिहीत स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व र नेपाली साझेदारको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत सेयरको अंश।
एनसेलको सुरुको कुल सेयर पुँजी दश करोड रुपैयाँमा ५७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा जोड्दा करिब ५७ अर्ब १० करोड र यो आर्थिक वर्षको जुन मितिमा यो सेयर हस्तान्त्रण हुँदैछ त्यो मितिसम्मको कुरा गर्दा त्यो बढेर ६३ अर्ब रुपैयाँ भएको हुन सक्छ।
कुनै पनि कम्पनीको कितावी मूल्य सय रुपैयाँ छ भने र त्यो व्यवसायको भविष्यमा आर्जन गर्ने मुनाफाका आधारमा तेब्बर चौबर पुग्दा आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरा छैन्। मूल्यांकनको सम्बन्धमा अझै केही कम मूल्यांकन गरियो कि भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिने अवस्था छ। र यो फेरि ज्यादै कम मूल्यांकन पनि होइन।
एक हदसम्म टेलियासोनेराले मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। टेलियासोनेराको अन्तर्निहीत स्वामित्वमा रहेको सेन्ट किट्स र नेदरल्याण्डको सम्पत्ती एक्जियटालाई बिक्री गर्ने क्रममा जुन लाभ (करिब १३६ अर्बमा ६० अर्ब घटाउँदा) छ। त्यसवापतको लाभकर नेपालको आयकर कानुन अध्ययन गर्दा नेपालमै लाग्ने देखिन्छ।
नेपालको आयकर ऐनको परिभाषामा निहित स्वामित्वको कुरा गरिएको छ। त्यसको व्याख्या हेर्दाखेरि त्यो सेयर जहाँ भए पनि जुनसुकै कम्पनीको स्वामित्वमा रहे पनि देशभित्र भए पनि देशबाहिर भए पनि त्यसको पुँजी आर्जन गर्ने निहित स्वामित्व अथवा त्यो सम्पत्ति नेपालमा छ भन्ने त्यसले देखाउँछ।
यदि यसमा केही द्विविधा लाग्छ भने आयकर सम्बन्धमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रशासन सम्बन्धमा राष्ट्रिय करको प्रचलनको सम्बन्धमा राम्रो जानकार भएका व्यक्तिको परामर्श लिएर कुनै पनि किसिमले टेलियासोनेराबाट दायित्व चुकाउन लगाउनुपर्छ। यसमा एक्जियटाको भने कुनै दायित्व हुँदै हुँदैन।
विगतमा योभन्दा पहिले पनि एनसेलको स्वामित्व पटक पटक हस्तान्तरण भएको छ। यसरी हस्तान्तरण हुँदा पुँजीगत लाभकर तिरिएका रेकर्डहरु छन्। जबकि चरित्र त उस्तै थियो। चरित्र उस्तै हुँदा तिर्नुपर्ने अहिले चरित्र फरक छ भनेर व्याख्या गरेकै आधारमा यसपटक तिर्न नपर्ने अवस्था त हुँदै हुँदैन। यसलाई राजस्व प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा त्यहाँबाट बोली आउँदा पुँजीगत कर नर्वेमा लाग्छ कि, सम्झौता भएको मलेसियामा लाग्छ कि सिंगापुरमा लाग्छ कि भनेर उट्पट्याङ कुरा गर्नुहुँदैन।
दोस्रो पक्ष २० प्रतिशत सेयर एक जना नेपाली नागरिकका नाममा थियो। त्यो सेयर अर्को नेपालीका नाममा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छ। नेपालीको सम्वन्धमा त पुँजीगत लाभकर लाग्छ भन्ने कुरा क्रेता र बिक्रेताबीच एक किसिमको बुझाई छ। र त्यो सार्वजनिक रुपमा आएको पनि छ।
तर जसरी ८० प्रतिशत सेयरको सम्बन्धमा १३६ अर्बको मूल्यांकन गरियो। २० प्रतिशत सेयरका लागि तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै गरिएको सुन्नमा आएको छ। त्यो भने अस्वभाविक हो। त्यो अस्वभाविक किन हो भने एक किसिमले २० प्रतिशत सेयर पनि एउटा कम्पनीमा कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेष्ट अथवा नियन्त्रण गर्न सकिने स्वार्थ रहेको मान्न सकिन्छ।
त्यहाँ ८० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले सबै प्रवन्ध गरेर २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले केही गर्न पाउँदैन भन्ने व्याख्यासँग म सहमत हुन सकिन्न। व्यवस्थापनमा पनि उनीहरुको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था थियो र हुनेछ। नेपालको आयकर ऐनले एक प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर कारोवारमा पब्लिकमा पनि प्राइभेट दुवै कम्पनीमा हेर्नसक्छ। त्यसमाथि २० प्रतिशत यसै पनि ठूलो कुरा भयो।
दुई वटाको आकार अलिकति फरक भएका कारण मूल्याङ्कनमा केही तलमाथि हुन सक्थ्यो। १३६ अर्बको चार भागको एक भाग गर्दा करिब २८ अर्ब नभएर २४/२५ अर्ब रुपैयाँ भयो भने त्यति शंका गर्नुपर्ने कुरा थिएन। तर २८ अर्ब मूल्याङ्कन भएर त्यसको आधारमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्तिका लागि तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्नु सरासर नेपालमा कर छल्ने प्रपञ्च गरिएको हो। त्यसमा त सवाल गर्ने प्रश्न नै भएन।
नियामक निकायमा सेयर खरिद बिक्रीको जानकारी दिन नगए पनि कर दायित्व नै नभएको एक्जियटाले कर छुट माग्दै आन्तरिक राजस्व विभागमा भने निवेदन दिएको कुरा पनि आयो। टेलियासोनेरालाई लाग्नु पर्ने कर दायित्वका लागि एक्जियटाले निवेदन दिनुको कुनै अर्थ छैन्। त्यो निवेदनलाई अस्वीकार गरे कसैको उजुरबाजुर लाग्दैन्। किनकि एक्जियटाले निवेदन दिनै मिल्दैन्।
करका अधिकारीहरु कुन निवेदन स्वीकार गर्ने, कुन निवेदन अस्वीकार गर्ने यति विषयमा जानकारी राख्छन्। मानौं उनीहरुले त्यसमा विवेक पुर्याउन सकेनन् भने के हुन्छ?
यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका सक्षम अधिकारीका रुपमा महानिर्देशकको हुन्छ। तर आयकर ऐनको दफा ७२ को उपदफा ४ अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनको अधिनमा रहेर मात्रै महानिर्देशकले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्। यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा अर्थमन्त्रालयको अधिकार सम्पन्न अधिकारीले निजसँग माग गरिएको पूर्वादेशका सम्बन्धमा निर्णय नगर्न निर्देशन दिन सक्छन्।
माथि उल्लेख भएअनुसार राज्यलाई पर्ने बित्तीय प्रभाव समेतका आधारमा यो विषय अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ। यसमा अर्थमन्त्रालयले निगरानी त राख्नैपर्छ आवश्यक परे आन्तरिक राजस्व विभागलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत राख्छ।
टेलियासोनेराले मुनाफा लैजान नपाए पनि अहिलेसम्म इमान्दार प्रयास के गरेको थियो भने ट्रान्सफर प्राइसिङ गरेर नेपालभन्दा बाहिर नाफा सार्ने काम गरेको थिएन। त्यही भएर पनि सानो लगानी गरेर पनि टेलियासोनेराले नेपालमा ५९ अर्बभन्दा बढी सञ्चित मुनाफा हासिल गर्न सफल भयो। यस हिसाबमा टेलियासोनेराले अहिलेसम्म नेपालमा फेयर बिजनेस गरेको देखिन्छ।
एक्जियटाका केही अधिकारीहरुले आफ्ना सेयर होल्डरलाई गरेको केही ब्रिफिङका कागजात हेर्दा नेपालबाट सोचेभन्दा बढी नाफा गर्न सकिन्छ भनेका छन्। धेरै नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरुले दैनिकजसो आफ्नो परिवारलाई फोन गर्दा गरेको त्यो कलमा एक्जियटाले माध्यम कम्पनीका रुपमा कल राउटिङ गरेर नाफाको बढी सेयर एक्जियटामा राख्न सक्छ।
त्यसबाट बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कताकति भनाई एक्जियटाका अधिकारीबाट आएको सुनिन्छ। त्यसले गर्दा विगतमा जुन किसिमले ५९ अर्ब रुपैयाको सञ्चित मुनाफा एनसेलले तयार गर्‍यो। भविष्यमा एनसेल टाट पल्टिँदै जाने। एक्जियटाले नेपालमा कम नाफा देखाउने, नेपालमा टर्मिनेट भएको कलको बढी शुल्क अरु मुलुकमा उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ भने त्यहाँ राख्ने सम्भावना देखिन्छ।
त्यसको कारण किन पनि भने जसरी एक्जियटा प्रवेश गर्नका लागि गलत बाटो अपनाउन खोजेको छ। इमान्दार प्रयास देखाइरहेको छैन। नेताको हात समातेर जसरी नेपालले पाउने लाभकरको छुट (जबकि त्यो दायित्व उसको होइन)का लागि दबाब बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो पक्कै पनि राम्रो सकेत होइन। किनभने 'मर्निङ सोज द डे।'